Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey Muqdisho. – Radio Daljir
Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey Muqdisho.
Mogadishu, Apr 1 -Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay ka dib shir uu uga qeyb galay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaa oo ay soo qaban qaabisay Xafiiska Siyaasadda Q/midoobey ee UNPOS.
Ra?iisul Wasaaraha iyo wafdigii la socday ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cadde, halkaas oo ay ku soo dhoweeyeen Ku-Simaha Ra?iisul Wasaaraha, Wasiiro, xildhibaano, Ururada Haweenka Gobolka Banaadir iyo shacab kale oo aad u farabadan.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa marka uu soo degay kadib saxaafadda kula hadlay gudaha garoonka diyaaradda ee Aadan Cadde International Airport, Isagoona Sharaxaad kooban ka bixiyay Shirkii uu ku soo qaatay magaalada Nairobi iyo wixii looga hadlay.
?Shirka waxaa looga hadlay dardar gelinta Roadmap-ka,Dhameystirka xilliga kala guurka, arrimaha dastuurka iyo qodobadii ka soo baxay shirkii London iyo caqabada hortaagan?. Ayuu yiri R/Wasaaraha.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dhankooda ay Beesha Caalamka ka codsadeyn in la dardar geliyo taageerida dowladda iyo dhaqaale ku bixin tooda, Wuxuuna sheegay Ra?iisul Wasaaraha in arrintaasi ay si fiican ku soo dhamaatay.